နည်းပညာ - ရှန်ဒေါင်း ZhongPeng အထူးကြွေထည် Co. , Ltd မှ
Flue ဓါတ်ငွေ့ Desulfurization nozzle-အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးသူ nozzle
ဆွန်း Cone Sprial nozzle
အပြည့်အဝ Cone Sprial nozzle
နှောင့်အယှက်များနှင့် Pulse nozzle
မြင့်မားသောအပူချိန် Resistance လညျးမီးဖိုပရိဘောဂ
တောက်ပ Tube နှင့်အပူ Exchange
Precision ထုတ်လုပ်မှု & ဆက်သွယ်ရေး
ကုမ္ပဏီ PDF ကို Catalog
Office ကို & စက်ရုံအသွင်အပြင်
တုံ့ပြန်မှုကို Bond silicon carbide ၏အားသာချက်
တုံ့ပြန်မှု Bond silicon carbide (RBSC, ဒါမှမဟုတ် SiSiC) ထုတ်ကုန်အစွန်းရောက်ခိုင်မာသော / ပွန်းပဲ့ခုခံခြင်းနှင့်ရန်လို enviroments မှာထူးချွန်ဓာတုတည်ငြိမ်မှုကိုဆက်ကပ်။ silicon carbide အပါအဝင်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဝိသေသလက္ခဏာများထားပါတယ်တဲ့ဒြပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်:
ဌ Excellent ကဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
RBSC ၏ခွန်အားအရှိဆုံး nitride ကပ်လျက်တည်ရှိ silicon carbide ၏ထက်နီးပါး 50% သာ. ကြီးမြတ်သည်။ RBSC ထူးမြတ်သောအရောင်အချေးခုခံနှင့် antioxidant ကြွေ .. ဒါဟာ desulpurization nozzle (အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးသူ) အမျိုးမျိုးသို့ဖွဲ့စည်းခဲ့နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဌ Excellent က wear နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခုခံ .
ဒါဟာအကြီးစားပွန်းပဲ့ခံနိုင်ရည်ကြွေနည်းပညာ၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ RBSiC စိန်၏ချဉ်းကပ်မြင့်မားခိုင်မာသောရှိသည်။ silicon carbide ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဆင့်ကြီးမားသောအမှုန်များ၏သက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ပွန်းစား wear သို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြနေကြသည်ဘယ်မှာကြီးမားသောပုံစံမျိုးစုံဘို့ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ တိုက်ရိုက်အလင်းအမှုန်၏ impingement အဖြစ်သက်ရောက်မှုနှင့် slurries ်မိုးသည်းထန်စွာစိုင်အခဲများလျှောပွန်းပဲ့မှခံနိုင်ရည်။ ဒါဟာကန်တော့ချွန်နှင့်စွပ်အိတ်ပုံစံမျိုးစုံအပါအဝင်ပုံစံမျိုးစုံ၏အမျိုးမျိုး, အဖြစ်ကုန်ကြမ်းများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ဒီဇိုင်းပိုမိုရှုပ်ထွေးအင်ဂျင်နီယာအပိုင်းပိုင်းသို့ဖွဲ့စည်းခဲ့နိုင်ပါသည်။
ဌ Excellent ကအပူစျေးမှာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
တုံ့ပြန်မှုကပ်လျက်တည်ရှိ silicon carbide အစိတ်အပိုင်းများထူးချွန်အပူစျေးမှာခုခံပေးပေမယ့်အစဉ်အလာကြွေထည်နဲ့မတူဘဲသူတို့မှာလည်းမြင့်မားသောစက်မှုခွန်အားနှင့်အနိမ့်သိပ်သည်းဆပေါင်းစပ်။
ဌ မြင့်မားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ (အပူချိန်မှာအကျိုးအမြတ်အစှမျးသတ်တိ) ။
တုံ့ပြန်မှုကပ်လျက်တည်ရှိဆီလီကွန် carbide က1650ºC (3000ºFမှ2400ºC) မှအကွာအဝေး1300ºCအတွက်ဝန်-bearing application များအတွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုအောင်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်အခင်းအကျင်းပုတ်၏အလွန်နိမ့်အဆင့်ဆင့်မှာသူ့ရဲ့စက်မှုခွန်အားအရှိဆုံးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
တုံ့ပြန်မှု Bond silicon carbide
nitride Bond silicon carbide
2,65 ~ 2.75
W / (ဍ * ဋ)
13.5 ~ 14.5 (1000 ℃)
မွန် '' ခိုင်မာသောစကေး (တင်းကျပ်)
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ရပ်မှန် တုံ့ပြန်မှု Bond silicon carbide သည်:
ဒါကြောင့်အပေါ်ကို Power မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ, သတ္တုတွင်း, ဓာတု, ရေနံဓာတုဗေဒ, လညျးမီးဖို, Machinery ကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်း, တွင်းထွက်ပစ္စည်း & သတ္တုဗေဒနှင့်။
သို့သော်သတ္တုနှင့်၎င်းတို့၏သတ္တုစပ်မတူဘဲ silicon carbide အဘို့အဘယ်သူမျှမစံစက်မှုလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းများရှိပါတယ်။ ရေးစပ်သီ, သိပ်သည်းဆကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များနှင့်ကုမ္ပဏီအတှေ့အကွုံကျယ်ပြန့်နှင့်အတူ, silicon carbide အစိတ်အပိုင်းများကိုရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအတွက်အကြီးအကျယ်ကွာခြားအဖြစ်စက်မှုနှင့်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများနိုင်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုသင်ရရှိပစ္စည်းများ၏အဆင့်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။
ရှန်ဒေါင်း ZHONGPENG အထူးကြွေထည် CO ။ , LTD မှ
နေရပ်လိပ်စာ: Fangzi ခရိုင်, Weifang အားစီးတီး, ရှန်ဒေါင်း, PRChina
ဖက်စ်: (+86) 536-7631686
E-mail ကို: info@rbsic-sisic.com